ट्राफिक का’रबाहीमा परेपछि माग्ने बुढाले भने म अलि तीव्र गतिमै गाडी चलाउछु ! चिट का’ट्ने प्रहरी जवानसँगै मज्जाले हास्दै माग्ने बुढाले यसरी धन्यवाद दिए..(भिडियो) - Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/ट्राफिक का’रबाहीमा परेपछि माग्ने बुढाले भने म अलि तीव्र गतिमै गाडी चलाउछु ! चिट का’ट्ने प्रहरी जवानसँगै मज्जाले हास्दै माग्ने बुढाले यसरी धन्यवाद दिए..(भिडियो)
ट्राफिक का’रबाहीमा परेपछि माग्ने बुढाले भने म अलि तीव्र गतिमै गाडी चलाउछु ! चिट का’ट्ने प्रहरी जवानसँगै मज्जाले हास्दै माग्ने बुढाले यसरी धन्यवाद दिए..(भिडियो)
काठमाडौँ,८ माघ । बुधबार बिहानै बानेश्वर साथीलाई भेट्न घरबाट निस्कन साथ ग्वोर्को चोकमा हास्यकलाकार केदार प्रसाद घिमिरे (माग्ने बुढा) ट्राफिक प्रहरी का’रवाहीमा परे।हतार-हतार भएको कारण घिमिरेले कारको सिट बेल्ट लगाउन बिर्सिएछन् । उनलाई प्रहरीले चिट का’टेर पठाए ।
घिमिरे भन्छन,८ बजे बानेश्वरमा एक जना साथीलाई भेट्नु पर्ने काम थियो । ७:५६ बजे नै उहाले फोन गरेर म आइपुगे भन्नु भयो । म अलिक ढिलाई भए घरबाट निस्किदा ८ बजे नाघीसकेको थियो । त्यसैले अलिक हतारमा तीव्र गतिमै जादै थिए । घर नजिकै ग्वार्को चोकमै ट्राफिक प्रहरीले गाडी रोक्नु भयो । बेला बेलामा ट्राफिक प्रहरी जवान पनि यता उता जान रोक्ने गरेको थिए । त्यै भएर होला भनेर रोके । तर,प्रहरी जवानले तपाइले सिट बेल्ट लगाउनु भएको छैन रहेछ तपाईलाई हामी कारवाही गर्छौ है भने । यस्तो मिठोसँगले भन्नु भयो कि लाइसेन्स र बिल बुक दुवै दिउ दिउ लाग्यो । मैले पनि हस हजुर भनेर दिए । ट्राफिक जवानले चिट काट्नु भयो । म हतार हतार निस्किए । उनलाई का’रवाही गर्ने ट्राफिक प्रहरी जवान थिए सन्तोष चौधरी। धेरै पटक यस्तो का’रवाहीमा परेको समेत बताए ।
त्यसैको चिटको बिल तिर्न बैक पुगे तर बैक ब’न्द भैसकेको थियो । नजिकैको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथ पुगेर ति आफुलाई का’रवाही गर्ने जवानलाई भेटेर धन्यवाद दिन चाहाना भयो । घिमिरेले महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भिमप्रसाद ढकाललाई पनि चिनेका थिए । त्यसैले ति प्रहरी जवान चौधरीलाई भेटाइ दिन आग्रह गरे । त्यसपछि चौधरीसंग भेटेर धन्यवादसमेत दिए । जवान चौधरी पनि घिमिरेलाइ का’रवाही गर्न पाउदा निकै खुसि लागेको बताए । का’रवाही गर्दा आफुले नचिने पनि बताए । तर, चर्चित कलाकारलाई का’रवाही मार्फत भेट्न पाउदा आफु निकै खुसि भएको समेत बताए ।
आफुले ठिक्क गतिमा अलिक छिटै पनि गाडी चलाउने पनि बताए । घिमिरेले सडक दु’र्घटना बढी रहेको छ । तर आफु सधै स’चेत हुनु पर्छ भनेर सबै चालकहरुलाई संदेश समेत दिए ।
समर्थनका लागि चितवन पुगेका ऋषि धमलाले ल्याए नमिठो खबर
कोरोनाभाइरसको त्रासले ७ हजार जनालाई पानीजहाजमै थुनियो
आखिर किन बिनय जंग बस्नेतले पुण्य गौतममाथि हा तपा त गरे (पुरा भिडियो)